ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပမှ ဦး ဆောင်သော disply screen စီမံကိန်းများအတွက် privacy ကိုကျွန်ုပ်တို့ကာကွယ်သည်
1. ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်း. ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဒီဇိုင်းနှင့်စာသားအားလုံး, ဂရပ်ဖစ်, သတင်းအချက်အလက်, အကြောင်းအရာ, နှင့်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှပြသထားသောသို့မဟုတ်၎င်းကိုပြသထားသောအခြားပစ္စည်းများသည်မူပိုင်ခွင့်ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အခြားဥပဒေများ. ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ contents မူပိုင်ခွင့်ရှိသည် (ဂ), Hyte အုပ်စု, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး. ထိုကဲ့သို့သောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုခွင့်ပြုချက်မရှိပဲအသုံးပြုခြင်းသည်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများကိုချိုးဖောက်နိုင်သည်, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဥပဒေများ, privacy နှင့်လူသိရှင်ကြား၏ဥပဒေများ, နှင့်အခြားဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများ.
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်. ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အချို့, ကုန်သွယ်ရေးအမည်များ, ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အသုံးပြုသောသို့မဟုတ်ပြသထားသောဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများနှင့်အမှတ်တံဆိပ်များသည်မှတ်ပုံတင်ပြီးမှတ်ပုံမတင်ထားသည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်, trade names and service marks of Hyte and its affiliates. အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်, ဤဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အသုံးပြုသောသို့မဟုတ်ပြသထားသည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများသည်မှတ်ပုံတင်ထားသောနှင့်မှတ်ပုံမတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်, ၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏ကုန်သွယ်ရေးအမည်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများ. ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဘာမှမပါ ၀ င်ဘူး၊, ဆိုလိုသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်, မည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုမဆိုလိုင်စင်သို့မဟုတ်ပိုင်ခွင့်, ကုန်သွယ်ရေးအမည်များ, ဤဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများ (သို့) အမှတ်တံဆိပ်များသည် Hyte နှင့်အခြားပိုင်ရှင်၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်.
2. ထုတ်ကုန်များ, အကြောင်းအရာနှင့်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်.
အင်္ဂါရပ်အားလုံး, contents တွေကို, သတ်မှတ်ချက်များ, ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောသို့မဟုတ်ဖော်ပြခြင်းခံရသောထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းများ, အသိပေးခြင်းမရှိဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်. အလေးချိန်, အတိုင်းအတာများနှင့်အလားတူဖော်ပြချက်အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်ကြပြီးအဆင်ပြေစေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်. Hyte Group which operates this Web Site, ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုတိကျစွာဖော်ပြရန်သင့်တော်သောအားထုတ်မှုများကိုပြုလုပ်သည်, သက်ဆိုင်သောအရောင်များအပါအဝငျ; သို့သော်, သင်မြင်သောအရောင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာစနစ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်, သင်၏ကွန်ပျူတာသည်ဤကဲ့သို့သောအရောင်များကိုတိတိကျကျဖော်ပြလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မအာမခံနိုင်ပါ. ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာအချိန်မရွေးထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများပါဝင်ခြင်းသည်ဤထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအချိန်မရွေးရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။. သင့်ဒေသအတွင်းရှိသက်ဆိုင်သည့်ဒေသအားလုံးကိုစစ်ဆေးပြီးလိုက်နာရန်မှာသင်၏တာဝန်ဖြစ်သည်, ပြည်နယ်, အပိုင်နှင့်ပတ်သက်။ ဖက်ဒရယ်နှင့်နိုင်ငံတကာဥပဒေများ, ဤဝက်ဘ်ဆိုက်မှဝယ်ယူထားသောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း. အမိန့်အားဖြင့်, သငျသညျအမိန့်ထုတ်ကုန်ထုတ်ကုန်သာတရားဝင်ထုံးစံ၌အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုယ်စားပြုသည်.
ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပါတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်